आज टेलिभिजन दिवस यस्तो छ टिभीको इतिहास
बुधबार ५ मंसिर, २०७५ गोर्खाली न्युज डेस्क 7095
पन्ध्रौ शताब्दीको मध्यतिर युरोपमा जोन गुटेनबर्गले मुद्रण प्रविधिको विकास गरेपछि छापा पत्रकारिताको सुरुवात भए पनि त्यसको पाँच शताब्दी अर्थात पाँच सय वर्षछि मात्र टेलिभिजन प्रशारणको इतिहास सुरु हुन्छ । टेलिभिजन आधुनिक संचार युगको अभूतपुर्व चमत्कार नै हो । पूर्वाधारको विकास उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट प्रारम्भ भए पनि टिभी प्रशारणको सुरुवात र विकास भने विसौं शताब्दीमा भयो ।
वर्तमान संचार युगको सबैभन्दा प्रभावकारी र लोकप्रिय माध्यम नै टेलिभिजन बन्न पुगेको छ । सम्पूर्ण विश्वलाई अहिले एउटा सानो गाउँमा परिणत गर्ने सफलता टेलिभिजन माध्यमको विकास र विस्तारबाटै संभव भएको हो ।
टेलिभिजन प्रशारण गर्ने क्रम १९३० को दसकमा थालिए पनि प्रशारण पूर्वाधारको विकास भने धेरै पहिले नै भएको पाइन्छ । प्रशारण माध्यमको विकास टेलिग्राफको आविष्कारसँगै भएको मान्न सकिन्छ । सन् १८३५ मा सामुअल मोर्सले आविष्कार गरेको टेल्रि्राफ नै प्रशारण माध्यमको विकासको जग थियो । जुन टेलिग्राफ प्रविधिबाट तारको सहायताले अक्षरको प्रशारण हुन्थ्यो । यसपछि विभिन्न रुपमा प्रशारण प्रविधिको परीक्षण र प्रयोग सुरु भयो ।
टेलिभिजन आविष्कारको इतिहास खोज्दै जादा सन् १८८४ मा निपको नामका एक जर्मन नागरिकले तारबाट तस्बिर प्रशारण गर्ने एउटा स्कानिङ डेस्क तयार गरेको प्रसंगसम्म पुग्न सकिन्छ । सन् १८९० मा अमेरिकामा जेन्किन्सले यसबारे थप अध्ययन गरेको पाइन्छ । यो अध्ययनलाई युरोप र अमेरिकाका अरु विद्धानहरुले निरन्तरता दिए ।
सन् १८९५ मा इटलीका मार्कोनीले तारबिना ध्वनि वा आवाज संम्प्रेषण गर्ने प्रविधिको विकास गरेको करिब तीस वर्षछि मात्र चित्र पनि वायु तरंग बाट प्रशारण गर्न सकिने प्रविधिको आविष्कार भयो । स्कटल्याण्डका वैज्ञानिक जोन लोगी बर्यर्डले लण्डनमा सन् १९२६ मा वायु तरङ्ग माध्यमबाट ध्वनि मात्र होइन, चित्र पनि सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ भन्ने विधि पत्ता लगाए र पहिलोपटक उनले नै चित्र संम्प्रेषण प्रविधिको प्रयोग गरे । यसपछि युरोप र अमेरिकामा टेलिभिजनका थुप्रै परीक्षण प्रशारणहरु भए ।
टेलिभिजन माध्यमको विकास दुर्इवटा विश्वयुद्धबीच भएको हो । पहिलो विश्वयुद्धपछि टिभी प्रशारणका लागि अध्ययन तीव्र बनाइएको थियो । सन् १९३६ मा बेलायतबाट टेलिभिजन प्रशारण सुरु भयो । यसको जिम्मा बेलायत सरकारले विविसीलाई दियो । जुन अहिले पनि कायम छ । सन् १९३९ मा अमेरिकाबाट टेलिभिजनको नियमित प्रशारण सुरु भयो । तर यसअघि नै अमेरिकामा थुप्रै टेलिभिजनले च्यानलले परीक्षण प्रशारण तथा भिडियो प्रशारण गरिसकेका थिए ।
विकास र विस्तार : सिमाबिनाको संसार
दोस्रो विश्वयुद्धले टेलिभिजनको विकासमा वाधा पुग्यो । भर्खर विकास हुन लागेको टेलिभिजन माध्यम दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा फस्टाउन सकेन । टेलिभिजनको प्रयोगलाई युद्ध प्रयोजनका लागि मात्र सिमित गरियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र युरोप र अमेरिकामा टेलिभिजनको विकास र विस्तार राम्रोसँग भयो । विस्तार यति तीव्र गतिमा भयो कि दोस्रो विश्युद्धपति सन् १९४९ अघि नै अमेरिकामा दसहजार टेलिभिजन सेट थिए । व्यवसायिक र संस्थागत रुपमा निजी कम्पनीहरुले टेलिभिजन प्रशारण सुरु गरे । विस्तारै एशिया र अफ्रिकामा टिभीको विकास भयो । रेडियोको तुलनामा दक्षिण एशियामा टेभि माध्यम केही ढिलो भित्रियो ।
सुरुमा बेलायत र अमेरिका दुवै ठाउँमा रंगिन टिभि थिएन । श्यामस्वेत तस्विर टिभीबाट देखाइन्थ्यो । रंगिन टिभी प्रशारणको क्रम सन् १९५४ मा युरोप र अमेरिकाबाटै सुरु भयो । यसले टिभी माध्यमलाई अरु लोकप्रिय र आकर्षक बनायो ।
सन् १९७० मा भूउपग्रह प्रणालीको विकास भएपछि टेलिभिजन प्रशारणले नयाँं मोड लियो । भूउपग्रह प्रणालीबाट टेलिभिजन प्रशारण हुन थालेपछि यसको पहुँच र निकै फराकिलो र व्यापक भयो । टेलिभिजनको भूउपग्रह प्रणालीमा आधारित प्रशारण ले सिमाबिनाको संसारको सिर्जना गर्‍यो र ग्लोबल मिडियाको अवधारणा त्यहीबाट सुरु भयो ।
राष्ट्र राष्ट्रबीचको भौगलिक सिमा र र्सार्वभौभिकतालाई पनि मिचेर टिभी प्रशारणले आफ्नो पहुँच र प्रभावलाई ब्यापक र असिमित बनायो । सिमाबिनाको संसारको अवधारणासँगै विश्वव्यापी संचार विकास भयो । यसले गर्दा संसार अब एउटा सानो गाउँ भयो । भूउपग्रहको विकास र विस्तारसँगै विश्वव्यापी संचारले व्यापकता पायो ।
विविसी र सिएनएन को विश्वव्यापी प्रशारणले टेलिभिजन माध्यमको पहुँच निकै फराकिलो भयो । सन् १९८९ मा २४ घन्टे न्यूज सेवासहित सुरु भएको सिएनएनले निकै छोटो समयमा विश्वव्यापी प्रभाव जमायो । विविसी पनि ग्लोवल मिडियाको शसक्त माध्यम बन्न पुग्यो । यी दुवैले २४ घन्टा ताजा समाचार मात्र दिइरहेका हुन्छन् । विश्वका अधिकांश मुलुकमा यी दुवैले संवाददाता खटाएका छन् र सूचना तथा संचारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल बनाएका छन् । विश्वको जुनसुकै कुनामा भएको घटनाको समाचार वा सूचना पनि तत्कालै सारा विश्वका बासिन्दाले घरको टिभी सेटमा सचित्र हेर्न पाउने अवस्था उपलब्ध छ । मनोरञ्जनका लागि एमटिभी, सोनी, स्टार जस्ता च्यानल लोकप्रिय छन् । टिभीको विकाससँगै १९६० मा न्यु मिडियाको अवधारणा सुरु भयो । टिभीको विकास र विस्तारसँंगै विज्ञापनले व्यवसायिक रुपमा फस्टायो ।
टेलिभिजनको महत्व मानिसको जीवनशैलीसँग गाँसिएको छ । टेलिभिजन मानवजीवनको यति अभिन्न अंग भइसकेको छ कि अब टिभी बिनाको मानव संसार कल्पना गर्न पनि ग्राहो हुने अवस्था छ । धार्मिक प्रवचन, शारिरिक अध्यासदेखि सपिङ, कुकिङसम्मका सबै सिप र शिक्षा वा तालिम पनि टिभीबाटै दिन थालिएको छ ।
टिभी माध्यम सुरुमा मनोरञ्जन माध्यमको रुपमा विकास भए पनि पछि सूचना र शिक्षाका लागि पनि यो प्रभावकारी माध्यम बन्न पुगेको छ। तेस्रो विश्वका मुलुकमा टिभीलाई शिक्षा र विकासका लागि प्रभावकारी माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
मनोरञ्जन टेलिभिजनको प्रमुख उद्देश्य हो । आधुनिक जमानामा टेलिभिजन मनोरञ्जनको खानी हुन पुगेको छ । टेलिभिजनले मनोारञ्जनको अलग्गै संसार नै खडा गरेको छ । फिल्म हेर्न हल धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । राम्रा र चर्चित फिल्म, वृत्तचित्र, टेलिसिरियल देखि हास्यव्यंग्यसम्मका थुप्रै मनोरञ्जनका कार्यक्रम टिभीका आकषर्ण बन्न थालेका छन् ।
टिभीको असर : उपभोक्तावादी संस्कृति
टेलिभिजनले उपभोक्तवादी संस्कृतिको विकास गरेको छ । संस्कृतिलाई वस्तुको रुपमा चित्रित गरेको छ । सामाजिक मूल्य र सांस्कृतिको मौलिकता टिभीकै कारण नास हुँंदै गएका छन् । टिभीले जे देखायो, त्यही मूल्य र संस्कृति बन्ने, जीवनशैली पनि त्यस्तै हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । टिभी माध्यमको अनियन्त्रित प्रभाव र विस्तारले नयाँ उपनिवेश अर्थात साँस्कृतिक प्रभावलाई बल पुगेको छ । उपभोक्तावादी चिन्तन, भौतिकवादी सोच र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुँंदै गएको छ । ठूला ठूला वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु टिभी माध्यमको विकास र विस्तारमा हावी भएका छन् । पश्चिमबाट तेस्रो विश्वमा सूचनाको एकातर्फी प्रवाहा भइरहेको छ । बजारमुखी र नाफामुखी संचारले प्रथामिकथा पाएको छ । टेलिभिजन उद्योगमा पनि उदार अर्थतन्त्र, खुला बजार, निजीकरणको प्रभाव बढेको छ । टेलिभिजन माध्यमको व्यापकताले गर्दा अर्थतन्त्र वा पुँंजी नै मिडियामा एउटा शक्तिका रुपमा स्थापित भएको छ ।
युरोप तथा अमेरिकामा टेलिभिजन प्रशारण भएको करिब ४५ वर्षछि नेपालमा टेलिभिजन प्रशारण सुरु भयो । नेपालमा २०४१ सालदेखि पुस १४ गते टिभीको नियमित प्रशारण सुरु भएको हो । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछिको सुधारिएको पंचायतलाई अघि बढाउने क्रममा टिभी स्थापनाको गृहकार्यलाई तीव्रता दिइएको थियो ।
करिब सत्र वर्षम्म सरकारी टिभीको एकाधिकार रह्यो । निजी क्षेत्रबाट टेलिभिजन प्रशारण २०५८ मा मात्रै सुरु भयो । च्यानल नेपाल निजी क्षेत्रको पहिलो टिभी च्यानल हो । तर यसअघि नै नेपाल टेलिभिजनसँग समय किनेर योंग एशिया र सांग्रिलाले टेलिभिजन कार्यक्रम प्रशासरण गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रबाट कान्तिपुर टिभि र इमेज च्यानल प्रशारणरत छन् भने भारतबाट नेपाली भाषाको नेपाल वान पनि प्रशारण भइरहेको छ । नेपाल टिभीका दुइवटा च्यानलसहित आठ वटा टिभी प्रशारणरत छन् । सबैले भूउपग्रह प्रसारणका लागि अनुमति प्राप्त गरेका छन् । हालसम्म ११६ वटा टिभी च्यानलले टिभीले प्रशारणका लागि अनुमति प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा पनि न्यूज च्यानलका रुपमा एभिन्यूज टिभीको प्रशारण भर्खरै सुरु भएको छ । सगरमाथा टिभी पनि भर्खरै प्रशारण सुरु गरेको छ । नेपाली टेलिभजन च्यानलहरुले समाचार र मनोरञ्जनलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ ।
छिमेकको बढ्दो प्रभाव
नेपाली टेलिभिजन च्यानलका धेरै कार्यक्रमका उत्पत्ति, स्वरुप र शैली भारतीय टेलिभिजन च्यानलबाट प्रभावित देखिन्छन् । सिक्नेभन्दा पनि ठाडो नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढी हावी भएको पाइन्छ ।
कौन बनेका करोडपतिको नक्कल गर्दै नगद पाँचलाख र लखपति कार्यक्रम संचालन गरियो। आपकी अदालतको नक्कल गर्दै खुला इजालस कार्यक्रम ल्याइयो । समाचारका बीचमा जनमत दिने र एसएमएस र्सर्भे इन्डियन च्यानलको, र्सार्वजनिक सुनुवाई तथ वहस कार्यक्रम पनि एनडिटिभीबाट गर्ने। इन्डियन आइडलको नक्कल गर्दै नेपाली तारा भन्ने कार्यक्रम बनाइयो । आजतकको सिधी वातको नक्कल गर्दै विभिन्न कार्यक्रम चलाइएको छ ।
कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने शैली र कार्यकम निमार्ण स्वरुप दुवैमा पर्याप्तमा मात्रामा नक्कल गरिएको छ । अनुशरण गर्नु आफैमा नराम्रो होइन। तर यसमा मौलिकता थप्नु जरुरी छ। टेलिसिरियल र हास्यव्यंग्य कार्यक्रमको चलन पनि भारतीय टिभी च्यानलबाटै भित्रिएको हो । घन्टा घन्टामा समाचार दिने चलन नेपाली च्यानलमा पनि सुरु भएको छ ।
?? ???????? ???? ????? ? ?????? ?????? ldoccllnnx http://www.g4992y73iskfo90ldi3k5003e7vao77ms.org/ [url=http://www.g4992y73iskfo90ldi3k5003e7vao77ms.org/]uldoccllnnx[/url] aldoccllnnx
gay muscle dating sites bro4bros gay dating gay dating site philippines
gay dating game coming soon gay dating line portland oregon erotic gay dating
gay teen sex dating gay teen dating forum bdsm best gay dating cities
datingacrossdresser gay gay dating bisexual datingavirgo gay man
gay dating trans men teenage gay dating gay dating online south africa
Fresh Reishi Mushroom ???????????
Pipe Straightening Machine ??????????
personal statement editing service essays writers
online essay writing resume writing services atlanta
writing opinion essays essay writers service nature vs nurture essay
personal essay writing scholarships no essay what to write about in college essay
Advanced Foaming grade zinc oxide
All In One Gym Machine For Home ??????????? Advanced Foaming grade zinc oxide
asian sex games english subtitles sex games for parties my sex games com
sex games cancun gif sex with games teen sex party games
adults only sex games online sex games for couples guys and girls playing sex games
China Alphabet Puzzle Mat
China Zinc oxide electronic grade China Alphabet Puzzle Mat
Buy High Precision CNC Milling Machining Parts
Copper Pcb Buy High Precision CNC Milling Machining Parts
Adjustable Folding Cane Factories
The Fixation Of Direct Dyes The Fixation Of Direct Dyes Adjustable Folding Cane Factories